Hlola iMartinique - World Tourism Portal
Okufanele ukwenze eMartinique.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseMartinique
Bukela ividiyo mayelana neMartinique
Hlola i-Martinique a I-Caribbean isiqhingi esingumnyango waphesheya kwezilwandle France oLwandle lweCaribbean, enyakatho yeSt Lucia naseningizimu yeDominica. Lesi siqhingi siphethwe yiNtaba iPelee, okuthe ngo-8 Meyi 1902 kwaqhuma futhi yachitha ngokuphelele idolobha laseSanta Pierre, kwashona nezakhamizi ze30,000. ENingizimu yesiqhingi, kunamabhishi amaningi amahle anabavakashi abaningi. ENyakatho, amahlathi emvula kanye namabhishi anesihlabathi esimnyama kufanelekile ukukubona. Ingaphakathi lesiqhingi lintaba.
ILe Diamant: Idolobha laseBeach libhekene nesakhiwo sodumo seDay Rock.
I-Le Marin: Ichweba eliyinhloko lezikebhe zesikebhe, elise-bay.
UMorne Rouge: Ukufinyelela eMontagne Pelée.
USainte-Anne: Mhlawumbe idolobhana eliheha izivakashi kakhulu njengoba kuyindawo yokufinyelela kuwo wonke amabhishi anesihlabathi esimhlophe seningizimu, kufaka phakathi i-Les saline eyaziwa kakhulu kodwa egcwele abantu.
I-Saint-Pierre: Inhlokodolobha yangaphambili eyabhujiswa ukuqhuma kwe-1902, izinsalela eziningi zomlando. Idolobha lakhiwe kabusha kodwa lincane kakhulu kunelalinjalo.
ITrois-Ilets: Ngaphesheya kwechibi kusuka eFort de France futhi kungafinyeleleka ngesikebhe. Idolobha elivakashelwa elinamahhotela amakhulu, izindawo zokudlela kanye namakhasino.
IMacouba, idolobhana langaphambili likagwayi, njengamanje indawo enhle yokubukeka kahle enolwandle olukhulu nezintaba. Ngosuku olucacile, isiqhingi esingumakhelwane iDominica siyabonakala.
IBalata, idolobhana elincane elinesonto (elincane iS Sacre Coeur) elakhelwe ukukhumbula labo abashona eMpini Yezwe I kanye naseJardin de Balata ingadi enezinkulungwane zezitshalo zasendaweni eshisayo. Ibhuloho elincane elingakhethwa lingahamba ngezinyawo ezihlahleni zaphezulu.
I-Presqu'île de la Caravelle, i-30 min elula ukuhamba uye endaweni yokukhanyisela lapho uthola khona umbono wasesiqhingi sonke.
ITartane, idolobhana labadobi lapho uzothola khona i-surfing engaguquki kakhulu.
IMartinique ingumnyango waphesheya kweFrance futhi igcina isiko lamaFrance neCaribbean. I-cuisine yesiqhingi iyinhlanganisela enhle kakhulu yokupheka kweFrance neCreole okufanele ukukuzama. Ingxenye esenyakatho yesiqhingi ilanda abahamba ngezinyawo abafuna ukukhuphuka izintaba futhi bahlole amahlathi emvula ngenkathi izingxenye eziseningizimu zinikela ngezitolo namabhishi kulabo abakhethile ukuzilibazisa nje.
Isimo sezulu sishisa futhi sinomswakama ngokushisa okujwayelekile kwe-24 ° C kuya ku-30 ° C. Isimo sezulu silinganiswa yimimoya yezohwebo. Isikhathi semvula sisuka kuJuni kuya ku-Okthoba kanti lesi siqhingi sisengozini yokuqothulwa yizivunguvungu (izivunguvungu) njalo ngeminyaka eyisishiyagalombili.
Ngo-15th uJanuwari 1502, uChristopher Columbus wafika eMartinique eseyakhiwe manje. Wathola uMartinique enobutha futhi ehlaselwa izinyoka kakhulu ngakho-ke wahlala izinsuku ezintathu kuphela. Ubhabhathize lesi siqhingi ngegama elinikezwe abantu bomdabu, uMatino (isiqhingi sabesifazane) noma iMadinina (isiqhingi sezimbali).
Njengezinye iziqhingi zaseNtshonalanga Indian, iMartinique yathola umfutho omkhulu wezomnotho ngenxa kagwayi, i-indigo, ukukhiqizwa kukotini nomhlanga.
Ukuthuthwa komphakathi eMartinique kukhawulelwe kakhulu, okungachaza isizathu sokuthi kungani kunezimoto eziningi ezibhalisiwe eMartinique umuntu ngamunye kunenye indawo eFrance.
Naphezu kwethrafikhi, uma uzokwazi ukwenza kangcono ukuhlala kwakho eMartinique, kunconyelwa ukuthi uqashe imoto. Ngaphandle kwemoto uzolahlekelwa ezinye zezindawo ezinhle kakhulu zaseMartinique kanye nenkundla enhle.
Ukushayela eMartinique Ukushayela eMartinique kuzoba mnandi uma kuqhathaniswa nezinye iziqhingi zaseCaribbean. Imigwaqo eminingi inezinga elihle kakhulu. Kodwa-ke imigwaqo enkabeni yesiqhingi idlula ezindaweni ezinamatshe angaphezulu kakhulu kanti nokuqwashisa kuyelulekwa lapho uhlanganisa amajika amvamisa.
Kukhulunywa ngesiFulentshi nesiCreole eziqithini; IsiNgisi saziwa ezinye izakhamizi. Bajwayele ukukhuluma ngokushesha okukhulu uma kudingeka uma ubatshela ukuthi awusikhulumi kahle isiFulentshi.
Kukhona amabhishi amaningi eMartinique.
IGorges de la Falaise, eduze ne-Ajoupa-Bouillon. I-8: 00h-17: 00h. Ngobude bamamitha ayi-200 umfula i-Falaise ugeleza udabule phakathi kwe-canyon (amamitha ayishumi ukujula kanye nama-1-3 amamitha ububanzi). Ungathola i-canyon ngokuhlanganiswa kokuhamba nokubhukuda. I-canyon isempahla yangasese, yingakho imali ekhokhwayo (nayo ikhokhela umhlahlandlela).
Yazi ukuthi ezinye izingxenye zomzila zingeqa kuphela ngokubhukuda, ngakho-ke kufanele ugqoke amagiya okubhukuda (awekho ama-jean, amahembe, awekho ngisho nezigqoko). Kodwa-ke, udinga ukugqoka izicathulo zokuhamba ngezinyawo (azikho amaflip-flops njll) njengoba intaba ihamba phezu kwamatshe ashelelayo. Ungaqasha izicathulo ezifanele emnyango.
Qaphela ukuthi umhlahlandlela kungenzeka ukwazi ukuthwala amakhamera amancane, kepha ungalethi ngamaselula, amakhamera amakhulu noma ezinye izinto. Ungashiya izingubo zakho, igiya elizulazulayo, i-elekthronikhi njll ekhoneni lapho umhlahlandlela ulinde khona.
IMartinique iyindawo encike eFrance futhi isebenzisa i-euro njengemali. Amadola aseMelika namadola aseCaribbean aseMpumalanga awemukelwa ezitolo, kepha ezinye izitolo nezindawo eziningi zokudlela namahhotela zithatha amakhadi wesikweletu. Amanani amahle wokushintshana angaba namabhange. Akuwona wonke amabhange azokwenza izinto zangaphandle futhi angakuqondisela eFort De France ukwenza lokho.
Kubikwa ukuthi, iminikelo emihle kakhulu ifaka phakathi ukungenisa okunethezeka kwaseFrance (isib. Amakha, amafashoni, amawayini) nezinto ezenziwe esiqhingini, isb, izinongo kanye ne-rum. Futhi abanye abathengisi banikela ngembuyiselo yentela yamaphesenti ama-20 ngokuthenga okwenziwe ngamakhadi wesikweletu noma amasheke abahambi, yize abaningi bengayemukeli eyokugcina.
Amathuba okuthenga afaka:
IGalleria, eLamentin (esiseduzane nesikhumulo sezindiza), iyindawo enkulukazi yezitolo kulesi siqhingi, enezitolo ezimbalwa ezinomkhiqizo waseYurophu nabanye.
IMakethe yeSpice yaseFort-de-France inikeza izitolo ezigcwele izimbali zasendaweni / ezahlukile, izithelo nemifino entsha, namakhambi nezinongo.
URue Victor Hugo… Umgwaqo omkhulu wezitolo waseFort-de-France… umucu wezindawo zokuzenzela ezinjengezitolo ezincane ezinjengeParis, izitolo zesiqhingi nabathengisi bezithelo nezimbali ezintsha
Njengesiqhingi esinqunyiwe sobuKatolika, zimbalwa kakhulu izitolo ezivulwa ngamaSonto noma ngamaholide agujwa eFrance.
Amahora webhizinisi: ngamaSonto angathola izitolo eziningi zivaliwe. Bheka kusengaphambili ngaphambi kokuqasha ukuthutha ukuya kunoma yisiphi isitolo noma indawo yezitolo.
IMartinique ihlukile ngokungafani neningi lezinye iziqhingi zaseCaribbean ngoba inezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela. Kukhona amathofi we-456 kanye / noma izindawo zokudlela zesiqhingi - okungahlanganisi imigoqo ehlukahlukene abanye abasebenza ukudla kanye notshwala; kuze kube yizikhungo ezihlobene nokudla ezihlobene ne-500. Izindawo zokudlela eziseMartinique zisukela ezitolo zokudlela ezikhethekile ezisezingeni eliphakeme kuya kuma-crêpes, ama-accras, ama-boudin, ama-jusi wezithelo nobisi lukakhukhunathi umuntu angawuthenga kubathengisi bokudla ogwini noma ezitolo zokudlela ezitolo zokudlela / izitolo zokudlela ezisedolobheni.
Ubuningi bezindawo zokudlela zeCréole nezaseFrance zibonisa ubukhazikhazi hhayi nje wezivakashi zaseFrance eMartinique kodwa futhi nesimo sesiqhingi njenge-DOM yaseFrance. Kube nentshisekelo ekhulayo ezitsheni zendabuko zesiqhingi, ngakhoke, ukutholwa okuningi kwakamuva kwenombolo yokudlela yaseCréole. Izindawo eziningi zokudlela zivumelanisa amamenyu abo ukuze anakekele ukunambitheka kwamaCréole nawaseFrance
Izinguquko ekubumbeni kwabavakashi (ukuziphatha, intshisakalo) zingahle zibike ngokuvela kweminikelo yokunikela ezindaweni zokudlela eziningi zanamuhla. Izindawo zokudlela eziseMartinique azigcini nje ngokudla okudla kwaseFrance nokwamanye amazwe, kepha futhi kungenzeka ukuthi kudliwe ukudla kwasendaweni. Izivakashi zingathola amazwibela ngemuva kwesigcawu esingokoqobo mayelana nemikhuba yobunyoninco yaseMartiniquan ngokusebenzisa i-'uqobo 'iCuole cuisine.
Izindawo zokudlela, izincwadi zokupheka zaseCréole, imibuthano yomphakathi kanye nemikhosi, kanye namakamelo okudlela abizayo amahhotela okunethezeka aphethwe ngabangaphandle lapho kudliwa khona ukudla, wonke avele njengezizathu ezibalulekile lapho imibono mayelana nokudla kwaseMartinique, ngakho-ke, ubunikazi, ubuqiniso nendawo ihlolwa ngokuqhubekayo .
Njengangaphakathi France, amanzi aphephile ukuphuza empompini, futhi izindawo zokudlela zizokujabulela lokhu ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe.
Amajusi wezithelo amasha adumile kakhulu kulesi siqhingi kanye ne-jus de canne okuyisiphuzo esimnandi sikamoba esivame ukuthengiswa ngamaveni emigwaqweni emikhulu. Le jusi ayihlali emisha isikhathi eside, ngakho-ke cela ukuthi yenziwe entsha ngenkathi usalinda futhi uyiphuze ngokushesha ngangokunokwenzeka ngama-cubes ayi-ice kanye nesipikili sikamoya.
IMartinique idume ngezinsizakalo zayo ezisezingeni lomhlaba futhi isiqhingi namuhla sisaphethe inqwaba yama-distilleries amema izivakashi ukuthi zihlolisise umlando wazo. Izindlela zokukhiqiza zigcizelela ukusetshenziswa kwejusi entsha evela kumoba ukuze kukhiqizwe “i-rhum Agricole”, esikhundleni se-molasses esetshenziswa kabanzi kwenye indawo.
Yize i-rum ithandwa kakhulu, ubhiya wasendaweni eMartinique yiBière Lorraine.
Letha ama-sunscreen amaningi!
Futhi, gcina i-hydrate, ikakhulukazi lapho uhamba ezintabeni ezintabeni. Isigqoko kwesinye isikhathi siyinto enhle ukuba nayo ngoba ilanga lingashisa ngokweqile.
Imikhuba yokuhlonipha izokudlula kakhulu kuleli banga le I-Caribbean. Lapho ufaka ibhizinisi, njalo uthi, 'Bonjour' no 'Merci, au revoir' lapho usuka. Futhi qaphela ukuthi izinto zivame ukuhamba kancane lapha, ngakho-ke ukubekezela kumele. Futhi, ungalindeli i-kowtowing, ukumomotheka 'abomdabu'. AbakwaMartiniquais bangabantu abaziqhenyayo kakhulu, abanesizotha futhi bavame ukuqaphela izivakashi ezingenasineke ngaphandle kwemikhuba.
Abesifazane abangahambisani nezindawo zokuvakasha nezasolwandle kungenzeka bathola ukubizwa kwekati nokunakwa okufanayo okuvela emadodeni. Isizathu esidumile salokhu ukuthi kunenani elikhulu labesifazane kunabesilisa esiqhingini. Indlela engcono yokubhekana nokunaka okungafuneki ukunganaki ukunakwa noma ukusho ngokuqinile ukungabi nandaba.